Maraakiibtii ugu badnaa ee jariif ah oo lasoo geliyay biyaha Puntland-Dhagayso
Home /Blog/Maraakiibtii ugu badnaa ee jariif ah oo lasoo geliyay biyaha Puntland-Dhagayso
Xeebaha Puntland ayaa waxaa soo gaaray doonyo iyo maraakiib kale duwan oo kuwa jariifka kuwaasi oo aan horay noocooda loogu arag xeebaha Puntland.
Doonyahan ayaa kusoo xirtay qaarkood dekedda wayn ee magaalada Bosaaso , iyadoona ay soo baxayso walaacyo hor leh oo ay qabaan shacabka oo kusaabsan kalluumaysatada Puntland dhibaato dhaqaale oo xoog leh inay soo wajahdo halka horay ay ula dala dhacayeen bulshada dhibaatooyin horay ay ugala kulmeen jariifka.
War PuntlandNews24 ka helay sarkaal katirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka Badda ee Puntland oo diiday magaciisa in saxaafadda loo adeegsado ayaa sheegay doonyahan iyo maraakiibtan inay kusoo galeen heshiis dhexmaray madaxwaynaha Puntland iyo masuuliyiin katirsan dowladda Chine , xilli madaxwaynaha uu booqanayay wadanka Chine bishii November ee sanadkii hore.
Qaar kalluumaystada kamid ah oo lasoo xiriiray warbaahinta ayaa ka cawday xiligaan in doonyo iyo maraakiib jariif ah oo hor leh lasoo geliyo Puntland xilli ay jirto dhibaatooyinkii ugu xumaa ee dhaqaale.
Cumar Qariib oo ka mid ah kalluumaystada deegaanka Tooxin ee gobolka Gardafu ayaa ku calaacalay inay nasiib darro tahay masuuliyiinta inay wadanka soo geliyaan oo ay ruqsado siiyaan doonyo iyo maraakiib jariif ah oo bulshada dhibaato hor leh u keena oo horay saamaysay abaaro iyo dhaqaale la’ aan.
Puntland ayaa maamusha xeebta ugu dheer ee Soomaaliya , waxaana dhaqaalaha ugu badan uu kasoo geli jiray kalluumaysiga iyo xoolaha nool oo xiligaan abaaro ay ku habsatay , halka kalluumaysigana uu wax soo saarkiisa yaraaday sababo la xiriira maraakiibta jariifka.
Dowladda Chine ayaa leh maraakiib mamnuuc ka ah caalamka inay ka kalluumaystaan kuwaasi oo isticmaala qalab si daran u burburiya meelaha kalluunka uu ku tarmo.
QM oo Cambaaraysay Weerarkii shalay ka dhacay Muqdisho ee Gaystay dhimashada iyo dhaawaca
Maydadka 87-tahriibayaal ah oo laga helay xeebaha Liibiya